Fandefasana - Gemic
Ny fandefasana entana mazàna dia maharitra 3-4 andro handefasana azy ary azo arahana amin'ny Internet isaky ny mandeha. Ny parsela dia miantoka fiantohana tanteraka. Ilaina ny sonia rehefa hatolotra. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma ho an'ny ankamaroan'ny firenena. Tsy misy boaty PO (afa-tsy ny UAE, Saudi Arabia ary Koety), ny adiresy APO na FPO no azo ampiasaina. Fanamarihana: Raha manana 'sonia amin'ny rakitra' ianao dia miantso ny EMS mba hanafoanana io fanomezan-dàlana io. Ny fonosana izay alefa tsy misy sonia, noho ny 'sonia amin'ny fisie' dia tsy azon'ny mpitantana fiantohana anay atao.
Ny vatosoa rehetra aseho ho 'misy' dia efa tahiry ary vonona ny halefa eo noho eo. Ny baiko dia voahodina ao anatin'ny 1 andro fiasana. Manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
fampahafantarana fanampiny Any amin'ny firenena maro, ny fandefasana entana araka ny tokony ho izy dia iharan'ny haba sy haba amin'ny haba. Ny mailaka voasoratra anarana dia maharitra kokoa, fa matetika kosa dia misoroka sarany fanampiny. Faly izahay mandefa ny kaontinao ho toy ny "Fanomezana", saingy mariho tsara fa tsy voafehinay ny fiampangana fanampiny mety hitranga ao amin'ny firenenao.